डब्लूएचओका महानिर्देशक काठमाडौंमा
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का महानिर्देशक डा. टेड्रोस एडहानोम गेहब्रेयसस काठमाडौं आइपुगेका छन्।
भाइकाे शव बाेकेर विदेशबाट फर्किँदा... मलाई विश्वासभन्दा पनि झट्का लाग्यो। यो कसरी भयो? भाइलाई अस्पतालमा शान्त रूपमा सुतेको देखेर आँखा रसाए। ऊ सामान्य देखिन्थ्यो भने तातै थियो।
‘स्थानीय चुनावमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुन सक्छ’ ‘स्थानीय चुनावमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुन सक्छ’
विद्रोही अफ्रिकी-अमेरिकन गायिका
अमेरिकी स्वेत समाजसँग १२ वर्षकै उमेरमा विद्रोह गरेकी गायिका, गीतकार, संगीतकार तथा नागरिक अधिकार अभियन्ता निना साइमनको यात्रा अनुकरणीय छ।
सैनिक भन्ने बित्तिकै कठोरतासँग जोडेर हेरिन्छ, तर तिब्बतमाथि हमला गर्ने बेलायती सैनिक अधिकारी सर फ्रान्सिस एडवार्ड योङहस्बेन्डले दार्जीलिङबाट देखेको कञ्चनजङ्घा हिमालको वर्णन मन छुने खालको छ।
माओवादी द्वन्द्वका दागहरू
बसमा पेट्रोल बम प्रहार भएको दुई सातासम्म अन्जुले पोलाइको पीडा र यन्त्रणा सहिन्। उपचारका लागि भारतीय शहर रक्सौल लगिएको थियो। उनी घर फर्किन सकिनन्, उतै बितिन्।
कस्तो छ ‘मुलुकको मस्तिष्क’ मानिएको शहर? कुनै वेला ‘मुलुकको मस्तिष्क’ मानिएको शहर विराटनगर पछिल्लो केही वर्षयता भने ओरालो लाग्दै गएको छ।
कसरी ‘स्यालोफेक’ र ‘डिपफेक्स’ले चुनाव नै प्रभावित पार्न सक्छ?